ထိပ်ဆုံး ၃: linux အတွက်အကောင်းဆုံးကားဂိမ်းများ Linux မှ
ထိပ်ဆုံး ၃ - linux အတွက်အကောင်းဆုံးကားဂိမ်း
Luigys toro | | အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ 31/03/2018 18:17 | GNU / Linux များ, အားကစားပြိုင်ပွဲ
linux ရှိ Videogame လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုသည်အလွန်အရှိန်မြှင့်လာသည်။ ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားသည့်နေရာမှကုမ္ပဏီအမြောက်အများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများစတင်လာကြသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏ဂိမ်းများကို linux ကမ္ဘာရှိသုံးစွဲသူအမြောက်အမြားခံစားနိုင်သည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်ရပ်ရွာလူထုသည်အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုတီထွင်ရာတွင်တိုးတက်မှုများစွာရရှိခဲ့သည်။ ပိုမိုတိုးတက်မှုရှိသည့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကဏ္carမှကားဂိမ်းများဖြစ်သည်။ လူအများစုက Linux တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်တွေ့လိမ့်မည်ဟုယူဆကြသည် ယာဉ်ရပ်နားဂိမ်းများသို့သော်ထိုသို့မဟုတ်ပါ၊ Linux အတွက်အကောင်းဆုံးကားဂိမ်း၏ထိပ်တန်း ၃ တွင်ယနေ့အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပျော်စရာအကောင်းဆုံးကားဂိမ်းများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
VDrift- VDrift သည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်မျိုးစုံ platform ပြိုင်ပွဲဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကားကိုအပြည့်အဝမြန်နှုန်းဖြင့်မောင်းနှင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းတွင်မောင်းနှင်မှုကိုအမှန်တကယ်ခံစားရစေသည် Vamos ကိုအခြေခံထားသောပြီးပြည့်စုံသောဂိမ်းအင်ဂျင်တစ်ခုရှိသည်။ နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းများတွင်အမြင်အာရုံအခင်းအကျင်းသည်များစွာတိုးတက်လာသည်။ Vdrift ဒါဟာအောက်မှာဖြန့်ဝေသည် GNU အထွေထွေပြည်သူ့လိုင်စင် (GPL) v2ကတစ်ခုတိုးချဲ့အသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြုထားတဲ့။ ဂိမ်း၏အင်္ဂါရပ်များထဲမှများမှာ:
စစ်မှန်သောကားများအပေါ် အခြေခံ၍ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောယာဉ်များ။
Mouse / Joystick / Gamepad၊ ဘီး၊
Vdrift ကို ubuntu နှင့်အလားတူ distro များတွင် install လုပ်ရန် console တွင်အောက်ပါ command များကိုရိုက်ပါ။
ကျန်အပိုင်းများမှာ VDrift ကိုရနိုင်သည်
Open Racing Car Simulator (TORCS): ကျွန်တော်အနှစ်သက်ဆုံးပြိုင်ကား Simulator များထဲမှတစ်ခုမှာ TORCS ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် multi-platform၊ open source၊ အလွန်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး 32 နှင့် 64 bit архитектураကိုအသုံးပြုသည်။ ပုံမှန်ပြိုင်ပွဲဂိမ်းအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသော်လည်း၎င်းသည် ထို့အပြင်မော်တော်ယာဉ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု simulate ရန်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ TORCS source code ကို GPL ("Open Source") အောက်တွင်လိုင်စင်ရသည်။ ၎င်း၏တီထွင်သူများ Eric Espiéနှင့် Christophe Guionneau သည်အခြားပရိုဂရမ်မာများနှင့်အတူကုမ္ပဏီတွင် TORCS တွင်ကားများ၊ အပုဒ်များနှင့်ဂိမ်းအမျိုးအစားများကိုပြုလုပ်ရန်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခဲ့သည် ထို့အပြင် TORC သည်စျေးကွက်ရှိဂိမ်းထိန်းချုပ်မှုအားလုံးနီးပါးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကီးဘုတ်နှင့်မောက်စ်ဖြင့်လုပ်ဆောင်မှုသည်အလွန်လွယ်ကူသည်။
ဂိမ်းတွင်တောက်ပသောအလင်းရောင်၊ မီးခိုး၊ တာယာအမှတ်အသားများနှင့်ဘရိတ်ပြားများပါ ၀ င်သောဂရပ်ဖစ်များစွာရှိသည်။ အဆိုပါခြင်း simulation ၏ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပျက်စီးခြင်းနှင့်တိုက်မှု၏မော်ဒယ်ရှိပါတယ်, သူကအခြားဝိသေသလက္ခဏာများတို့တွင်လေခွင်းရုပ် (မြေပြင်အကျိုးသက်ရောက်မှု, ailerons) ရှိပါတယ်။ TORCS သည်ရိုးရှင်းသောလေ့ကျင့်ခြင်းအစီအစဉ်မှသည်ရှုပ်ထွေးသောချန်ပီယံအထိပြိုင်ပွဲမျိုးစုံကိုခွင့်ပြုသည်။ သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်ကစားသမားလေး ဦး အထိပြိုင်ဘက်ကင်းသောပြိုင်ပွဲတွင်ပျော်ရွှင်စွာကစားနိုင်သည်။ TORCS အဖွဲ့သည်အွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲစနစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ TORCS ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Linux distro တွင်တပ်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် -
Command ကိုသုံးပြီးအထုပ်ကိုဖြည်ပါ tar xfvj torcs-1.3.6.tar.bz2.
အောက်ပါ command များကို run:
console ထဲကနေ TORCS ကို run ပါ torcs
အိပ်မက်မြန်Linux မှာသင်ကစားနိုင်တဲ့ဂိမ်းကတော့ Speed ​​Dreams ပါ။ Open Source 3D ပြိုင်ကားဂိမ်း GPL လိုင်စင်ပါ။ Speed ​​Dreams သည်အမြင်အာရုံ၊ သက်ရောက်မှုနှင့်အထိခိုက်မခံသောလှုပ်ရှားမှုများတွင်တိုးတက်မှုအမျိုးမျိုးရှိပြီးတိကျသောမောင်းနှင်မှုကိုစစ်ဆေးရန်အာရုံခံကိရိယာလည်းရှိသည်။Speed ​​Dreams များကိုကီးဘုတ်၊ ကြွက်၊ joypads၊ joystick၊ ပြိုင်ကားဘီးများနှင့်ခြေနင်းများအပါအဝင် input device အမျိုးမျိုးဖြင့်ကစားနိုင်သည်။
Speed ​​Dreams ၏အဓိကလက္ခဏာများမှာ -
အမျိုးမျိုးသောဂိမ်း Modes သာ။ (လူမျိုး၊ ချန်ပီယံ၊ လေ့ကျင့်ရေး၊ အခြားသူများအကြား)
ရာသီဥတုနှင့်အချိန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ (အသုံးပြုသူသည်သူတို့ပြိုင်ပွဲဖြစ်လိုသည့်အချိန်နှင့်ရာသီဥတုကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီး interface သည်ပေးထားသောဖွဲ့စည်းမှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်) သတ်မှတ်ထားသောစံသတ်မှတ်ချက်များသည်ကားများ၏ရူပဗေဒနှင့်စွဲကပ်မှုကိုလည်းထိခိုက်သည်
အမျိုးမျိုးသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်။ (၎င်းသည် c ++ တွင်ထုတ်လုပ်ထားသော modules များ၏လုပ်ဆောင်ချက်ကိုခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်သင်ကားစက်၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကိုအတုခိုးနိုင်သည်။ )
Speed ​​Dreams ကို install လုပ်ရန်အောက်ပါ command များကိုလုပ်ဆောင်ရမည်
wget -q -O- http://archive.getdeb.net/getdeb-archive.key | sudo apt -key ထည့်ပါ -
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » ထိပ်ဆုံး ၃ - linux အတွက်အကောင်းဆုံးကားဂိမ်း
အဆိုပါဒဏ္myာရီစူပါ Tux Kart ပျောက်ဆုံးနေသည် http://supertuxkart.sourceforge.net/ .
ဆောင်းပါးကောင်းသော်လည်း Super Tux Kart ကိုမထည့်ခြင်းသည်ရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရိုးရှင်းတဲ့ linuxer ဟုသူကပြောသည်
ငါအရမ်းကောင်းသောဂရပ်ဖစ်ရှိပါတယ် Stunt Rally ကိုလက်လွတ်
အမှန်တကယ်ပျောက်ဆုံးနေသည့်အရာမှာ Dirt Showdown ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာလက်ရှိတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဖြစ်ပျက်လာတာကအဲဒါဟာပွင့်လင်းမှုလည်းမရှိ၊ အခမဲ့လည်းမဟုတ်ဘူး။ Grid Autosport သည်ဆိပ်ကမ်းသာကောင်းမွန်ပါက Feral သည်အနာဂတ်တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ဤအကြောင်းကြောင့် Linux တွင်ဂိမ်းများမရှိသလောက်နည်းပါးသည်။ Linux သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့အတွက်ပေးဆပ်ရန်ဆန္ဒမရှိကြဟုယူဆကြသည်။ ဤနေရာ၌ open source purists များစွာရှိပြီးအရာအားလုံးသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သို့သော် (ဖွင့်ဖွင့်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ဂိမ်းများသည်အလင်းကိုတစ်ခါမှမမြင်ဖူးခဲ့ပါ။ သို့သော်ခြွင်းချက်အနည်းငယ်ရှိပါက) ဤဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်အလွန်စျေးကြီးပြီးလိုအပ်သည်ကိုနားလည်သောဤနေရာတွင်လည်းရှိသည်။ မြင့်မားသောအရည်အချင်းပြည့်အလုပ်၏အကူအညီ။ အကောင်းဆုံးကတော့ကစားပွဲတစ်ခုအတွက်ငွေပေးပြီးဘယ် platform မှာမဆိုလွတ်လပ်စွာကစားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
SuperTuxKart သည်၎င်းစာရင်း၏အရည်အသွေးနှင့်စွဲလမ်းမှုအတွက်သာမကဘဲ Blender နှင့်အတူသင်၏ကိုယ်ပိုင်တိုက်နယ်များနှင့်ကတ်တ်များကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုထားသောကြောင့်ဤစာရင်းတွင်မပါ ၀ င်နိုင်ပါ။
သင် link ကိုနှိပ်လိုက်ရင်သင်မသိတဲ့ဒီဂိမ်းရဲ့အသွင်အပြင်အချို့ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။
Jesus B ကိုပြန်ပြောပါ
ချောင်းတွေ၏တုတ်များအခမဲ့နှင့်လက်တွေ့ကျကျ Simulator ကိုတန်းတူထူးချွန်😉
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် VDrift ကို install လုပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီး၊ ပို့သည်အတိုင်းပို့ခဲ့သော်လည်းအလုပ်မလုပ်ပါ။ command ကိုရိုက်ခြင်းအားဖြင့်:
PPA: 'ppa: archive.gedeb.net' ကိုထည့်။ မရပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ PPA နာမည်သို့မဟုတ်ပုံစံမှန်ကြောင်းစစ်ဆေးပါ။
ကျေးဇူးပြုပြီး post ကိုစစ်ပါ
ဒီမှာက install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုရှင်းပြသည်:
၎င်းသည် Ubuntu ဗားရှင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။
GNU / ကျန်းမာရေး - လူတိုင်းလက်လှမ်းမီနိုင်သောကျန်းမာရေးအတွက်စနစ်များ
မက်ထရစ် GRIMOIRE ဆော့ဖ်ဝဲမက်ထရစ်ကိုထုတ်လုပ်ရန်ကိရိယာများ။